गलबन्दी विवाद: बद्री पंगेनीको घरमा प्रकाश सपुत र शम्भु राईबीच संवाद « Jaitoon Online
जेठ ३०, काठमाडौं । नेपालको सांगीतिक बजार यतिबेला ‘गलबन्दीमय’ छ । प्रकाश सपुत र शान्ति श्री परियारको आवाजमा समावेश यो गीतले सबैभन्दा छोटो समयमा एक करोड भ्यूजको रेकर्ड राखिसकेको छ ।
गीतले बजार पिटिरहँदा विवाद पनि जन्मियो । पुराना गायक शम्भु राईले आफ्नो गीतको भाका नक्कल गरेर प्रकाश सपुतले ‘गलबन्दी’ बनाएको भन्दै गुनासो गरे । आफूले ५ बर्ष अगाडि गाएको ‘देउसी भैली’ गीतसँग प्रकाशको ‘गलबन्दी’ को लय मिलेको उनको दाबी छ ।
यो बिषयमा संगीतप्रेमी दर्शक–श्रोता पनि दुई धारमा विभाजित छन् । कतिपयले लोकगीतका भाका कतै न कतै मिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले प्रकाशले शम्भु राइको भाका चोरेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् ।
विवाद गहिरिँदै गएपछि लोकदोहरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बद्री पंगेनीले दुवै पक्षलाई राखेर सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने प्रयास थालेका छन् । पंगेनीको पहलमा उनकै घरमा बिहीबार बिहान शम्भु र प्रकाशबीच भेटघाट भएको थियो ।
भेटमा दुवै सकारात्मकरुपमा प्रस्तुत भएर छलफल गरेको अनलाइनखबरसँग बद्रीले बताए । ‘उहाँहरु दुवैको एक–अर्काप्रति दुराशय छैन, विवादलाई आपसी सहमतिमा सुल्झाउन दुवै जना तयार हुनुहुन्छ,’ पंगेनीले भने ।
गायक शम्भु राईले प्रकाश सपूतलाई आफूले निरुत्साहित गर्न नचाहेको तर आफ्नो सिर्जनाको नक्कल भएको टुलुटुलु हेरेर नबस्ने अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिए ।
यस सम्बन्धमा शम्भू, प्रकाश र बद्रीले हामीसित व्यक्त गरेको धारणा जस्ताको तस्तैः
शम्भु राई भन्छन् : आफ्नै सन्तान कुन बाबुआमाले चिन्दैन ?
‘गलबन्दी’ को लय मैले बनाएको ‘देउसी भैली’ बोलको गीतको लयसँग मिल्छ भनेर मैले भनिसकेको छु । तर, म प्रकाश सपुतलाई निरुत्साहित गर्न चाहन्नँ ।
यो बिषयमा हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ । यो संयोग हो, चोरी हो या प्रभावित हो, यो बिषयमा कुराकानी भइरहेको छ । उहाँले आफूले महसुस गरेको भनेर मलाई भन्नुभएको छ । तर मेरो भनाइ के हो भने एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । कसैलाई विस्थापित गरेर आफू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु गलत हो । नयाँ–नयाँ सिर्जना र आफ्नो मौलिकतामा गीत गाउँदा गर्दा राम्रो हुन्छ ।
मैले ‘गलबन्दी’ गीत सुन्दा नै आफ्नो लयसँग मिलेको महसुस गरेको थिएँ । तपाई आफैं भन्नुहोस् न, आफूले जन्माएको छोराछोरी कुन बाबुआमाले चिन्दैन होला ? मैले चिनेपछि प्रकाश भाइसँग यो बिषयमा कुरा गरेको हुँ ।
मैले पैसाको कुरा गरेको छैन । कपिराइटको मुद्दा हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने मैले सोचेको छैन । भोलिका दिनमा त्यो अवस्था आयो भने पनि गर्न सक्छु । तर म त्यो दिन नआओस् भन्ने चाहन्छु । किनकी, कसैले कसैको अपमान गरेको, आफ्नो घरबारी खाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिन्नँ । त्यो दिन नआओस् ।
हामी गाउने, नाच्ने र अरुलाई मनोरञ्जन दिने मानिस मात्र होइनौं । हामी एउटा सिस्टममा चलेनौं भने दर्शकले हामीलाई विश्वास गर्दैनन् । आफ्नो मिहिनेतमा पनि विश्वास गर्न आवश्यक छ ।
भाका कपी भयो भन्ने लाग्दैन: प्रकाश सपुत
मैले गाउँघरतिर सुनेको भाकालाई गीतमा टिपेको हुँ । नियतवश कपी गरेको होइन । श्रोतालाई सुन्दा त्यो गीत पहिले सुनेजस्तो लाग्छ भने ठिकै छ ।
मैले उहाँ (शम्भु राई) लाई अत्यन्तै सम्मान गरेर यसले तपाईँको अस्तित्वलाई मेटाउने भन्दा पनि लोकगीतलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरेको छ भनेको छु । सुन्दा उस्तै सुनिने भाकाहरु थुप्रै छन् । मैले उहाँलाई भाका मिल्यो, गल्ती गरेँ भन्ने महसुस गरेर भन्दा पनि अग्रजको हिसाबले रेस्पोन्स गरिरहेको छु ।
संगीतको शुद्धीकरणको लागि, अग्रजको सम्मानका लागि, कपिराइटको बिषयमा बहसका लागि कारबाही भोग्नुपरे पनि म तयार छु । तर, मलाई मैले कपी गरे भन्ने महसुस भएको छैन ।
चाँडै सहमतिमा पुग्छौं: बद्री पंगेनी
विवाद बढ्दै गएपछि मैले यसलाई समाधान गर्न अग्रसरता लिएको हुँ । आज दुवै जनालाई बोलाएर लामो छलफल गरेँ । सहमति उन्मुख कुराकानी भएको छ । कसरी सहमति गर्ने भन्ने विषय चाहिँ छलफलकै क्रममा छ ।
कुनै गीत अर्को गीतसँग कति मिल्यो वा मिलेन भनेर नाप्ने कुनै मापदण्ड छैन । मेरो व्यक्तिगत मूल्यांकनमा चाहिँ नियतवश कपी गरेको जस्तो लाग्दैन । संयोगवश मिल्न गएको हुनसक्छ । लोकसंगीतहरु भनेका एउटै आमाले जन्माएको सन्तान जस्तै हुन्, अनुहार कताकति मिलिहाल्छ । यदि कसैले नियतवश नै पुरानो सिर्जनालाई नक्कल गर्‍यो वा तोडमोड गर्‍यो भने चाहिँ त्यो गम्भीर विषय हो ।
विगतमा मेरै गीतको पनि नक्कल गरेर एकजना भाइले एल्बम निकाल्नुभयो । मैले गाएको ‘लायो लायो मोहनी लायो’ भन्ने गीतको नक्कल हुँदा मैले कुनै गुनासो गरिनँ ।
गलबन्दीको सन्दर्भमा भन्नुपर्छ, आज भएको कुराकानीमा दुवै जना लचिलो हुनुहुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने खालको अवस्था छैन । यसमा दुवैले गिभ एन्ड टेकमा जान तयार हुनुपर्छ । यसलाई हामीले घरभित्रको कुरा ठानेका छौं । त्यसैले बाहिर धेरै कोकोहोलो गर्नु ठीक हुन्न ।